အတတ်ပညာ တရုတ် Cotton Bud စက်ရုံနှင့် ပေးသွင်းသူများ |Zhongxing
1. လုံခြုံပြီး အဆိပ်အတောက်ကင်းသော၊ အထူးသဖြင့် အီလက်ထရွန်နစ် အိုင်တီလုပ်ငန်းအတွက် အထူးသင့်လျော်သော၊ ဖုန်မှုန့်မကျရောက်စေဘဲ၊ ချည်ခေါင်းသည် ပြန့်ကျဲခြင်းမရှိ၊ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတရှိသော ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခြင်း။
2. ဆေး၊ ကော်၊ epoxy၊ ချောဆီ၊ စသည်တို့ကို သန့်ရှင်းရေး၊ အသေးစိတ်ပြုလုပ်ရန်နှင့် အသုံးချရန် စွယ်စုံသုံးကိရိယာ။
3. အမြဲတမ်းမိတ်ကပ်၊ အလှကုန်၊ သို့မဟုတ် အခြားသော မော်ဒယ်လုပ်ခြင်း၊ ကြွေထည်များ၊ လက်ဝတ်ရတနာများ၊အထည်အလှဆင်၊ ဝါသနာ။
၄။အစွန်းနှစ်ဖက်ရှိ ချည်ခေါင်းများကို ဂွမ်းစများနှင့် နီးကပ်စွာ တွယ်ကပ်ထားသောကြောင့် ကျွတ်ထွက်မည်မဟုတ်သောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
5. ဝါဂွမ်းတံသည် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော အလျားနှင့် အကျယ်ရှိပြီး အသုံးပြုရအဆင်ပြေပြီး မြန်ဆန်သည်။
6. မတူညီသော အမျိုးအစားပစ္စည်းများ၊ အလင်းပြန်ပေးသည့် အလင်းပေးစက်၊ ပွင့်လင်းလွတ်လပ်သော ထုပ်ပိုးသည့်အိတ်များကို အသုံးပြုပါ၊ ဂွမ်းစုတ်အိတ်များ၏ အသွင်အပြင်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရပြီး ဖုန်မှုန့်များ၊ သန့်ရှင်းမှုနှင့် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုတို့ကို ကာကွယ်ရန် အသုံးပြုပြီးနောက် အလုံပိတ်သိမ်းထားနိုင်သည်။
ဇီဝပြိုကွဲနိုင်သောသေတ္တာ 200pcs/box ပါသော ချည်စုတ်များ
စျေးနှုန်းနှင့် နမူနာများ ရယူနည်း
သင်လိုချင်သော အရွယ်အစားနှင့် ပမာဏအတွက် ကျွန်ုပ်ကို ဆက်သွယ်ပါ၊ နမူနာများသည် သေးငယ်သောအရာများအတွက် အခမဲ့ (1 သို့မဟုတ်2pc) ဖြစ်သော်လည်း ပို့ဆောင်မှုမပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အမြန်အကောင့်ကို လက်ခံနိုင်ပါသည်။
အများအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်နာရီအတွင်း ကိုးကားပါသည်။
အရမ်းအရေးတကြီး၊ အချိန်မရွေး ဖုန်းဆက်ပါ။
OEM နှင့် ODM အတွက် အထူးကြိုဆိုပါသည်။
ဤလိုင်းတွင်အတွေ့အကြုံ 10 နှစ်ကျော်၊ သင့်ကိုယ်ပိုင်ပက်ကေ့ခ်ျကိုဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
လိုဂို၊ အရောင်၊ စတိုင်၊ အရွယ်အစား။
Western Union၊ Pay pal၊ T/T၊ L/C စသည်တို့။
ပို့ဆောင်မှုသည် အရေအတွက်နှင့် အထူးလိုအပ်ချက်အပေါ် မူတည်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် နမူနာများသည် 2-3 ရက်ဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုသည် 15-25 ရက်ဖြစ်သည်။
မှာယူမှုကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့စတင်နိုင်မည်နည်း။
1. သင်သည် လိုအပ်ချက်အရ စုံစမ်းမေးမြန်းရန် ပေးပို့သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အီးမေးလ် သို့မဟုတ် Skype/whatsapp ဖြင့် ဆွေးနွေးပါသည်။
2. အရေအတွက်၊ အရောင်၊ ပက်ကေ့ခ်ျ၊ ဈေးနှုန်း၊ အထူးလိုအပ်ချက်ကို အတည်ပြုပြီးနောက်၊ ငါ Profoma Invoice ပေးပို့ပါမည်။
3. Invoice ကို အတည်ပြုပြီး ငွေပေးချေမှုကို စီစဉ်ပါ။
4. ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်၊ ငါတို့သည်စတော့ရှယ်ယာများရှိပါကထုတ်လုပ်မှုကိုစီစဉ်ပေးသည်၊ ပို့ဆောင်ရန်စီစဉ်ပေးလိမ့်မည်။
ကျေးဇူးပြု၍ သင့်မက်ဆေ့ခ်ျကို ချန်ထားခဲ့ပါ သို့မဟုတ် ဖုန်း/ whatsapp/wechat ဖြင့် ကျွန်ုပ်ကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ၊ ကျွန်ုပ် အချိန်မီ အကြောင်းပြန်ပါမည်။
Eco Ear Cleaning Buds ဝါး/သစ်သားချောင်း Cotton Makeup Swab
အကြံပြုချက်များ: အဖြူရောင်; ဝါးချောင်း; သစ်: သဘာဝ
100pcs / စက္ကူသေတ္တာ
နားကို ဂွမ်းဘူးများ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ချည်ဘူးများ ထုတ်လုပ်သည်။
ယခင်- Cotton Bud ဘူးသီး Cotton Bud ထုတ်ကုန်အသစ် 200pcs ဇီဝပျက်စီးနိုင်သော Cotton Swab Dsiposable Cotton Swabs
Fda ဖြင့် တခါသုံး Mask ၃ လွှာ, Mask အလုပ်, မျက်နှာကဲ့သို့ Mask, Ffp1 တစ်ခါသုံး Mask,3Ply တစ်ခါသုံးမျက်နှာဖုံး, တစ်ခါသုံး Half Mask အသက်ရှူကိရိယာ,